Geforce अनुभव त्रुटि 0x0003 कसरी ठीक गर्ने मोबाइल फोरम
Geforce अनुभव त्रुटि 0x0003 कसरी ठीक गर्ने
क्रिस्टियन गार्सिया | 22/09/2021 09:40 | ट्यूटोरियलहरू
यो पहिलो पटक होईन जब हामी Geforce अनुभव संग हुने अजीब त्रुटिहरु को बारे मा कुरा गरीएको छ। यस अवसर मा हामी विशेष गरी संग व्यवहार गर्नेछौं Geforce अनुभव त्रुटि 0x0003। यदि यो सानो समस्या देखा पर्‍यो भने, तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँ यसको उपचार को लागी सही ठाउँ मा आउनु भएको छ। हामी तपाइँलाई यस लेखको अवधि को लागी सबै सम्भव वा सबैभन्दा प्रभावी समाधान दिनेछौं। तपाइँ तपाइँको पीसी वा त्यस्तो केहि को बारे मा चिन्ता गर्न को लागी छैन, सबै कुरा एक पल मा हल गर्न सकिन्छ।
यदि तपाइँ विषय मा धेरै एनभीडिया Geforce अनुभव यू होईनविन्डोज १० को लागी सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने एनभीडिया चालकहरु हैन। वास्तव मा, यदि तपाइँ भिडियो गेम खेल्नुहुन्छ, यो शायद तपाइँलाई परिचित लाग्छ जब देखि तपाइँ यसलाई तपाइँको पीसी मा प्रयोग गरीरहनु भएको छ र तपाइँ यो धेरै देख्नुहुनेछ। यदि तपाइँ एक Nnvidia ग्राफिक्स कार्ड प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने यो उद्देश्य को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो। एक सामान्य नियम को रूप मा, उनीहरु बजार मा सबै भन्दा व्यापक छन् र सबैभन्दा लगभग कुनै पनी पीसी मा प्रयोग गरीन्छ कि तपाइँ लगभग कुनै पनी पसल मा किन्नुहुन्छ।
समाधान "एक Nvidia GPU मा जोडिएको प्रदर्शन प्रयोग गरीरहेको छैन"
यहाँ Nvidia Geforce अनुभव संग के भइरहेको छ त्यो हो - लगभग सधैं जस्तै - एक नयाँ Windows 10 अपडेट हामीलाई असफल हुँदैछ। त्रुटि को धेरै मामलाहरु विन्डोज र Nvidia अनुभव प्रयोगकर्ताहरु द्वारा रिपोर्ट गरीएको छ। वास्तव मा, अधिक सटीक हुन को लागी, यो Geforce अनुभव त्रुटि 0x0003 हुनेछ, कि भन्न को लागी, थप 0x0003 निर्दिष्ट गर्न को लागी हो। जब पीसी पुन: सुरु धेरै प्रयोगकर्ताहरु यो त्रुटि कोड देख्छन् तर यो केहि हो कि विन्डोज7पछि भयो र हामी यसको लागी समाधान छ।
1 हामी Nvidia Geforce अनुभव को बारे मा के थाहा छ?
2 Geforce अनुभव कोड त्रुटि 0x0003 किन देखा पर्दछ?
2.1 समाधान १: Nvidia Geforce लाई डेस्कटप संग अन्तरक्रिया गर्न को लागी अधिक अनुमति दिनुहोस्
2.2 समाधान २: Nvidia Geforce पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
2.3 समाधान ३: नेटवर्क एडाप्टर रिसेट गर्नुहोस्
2.4 समाधान ४: सबैभन्दा नयाँ ग्राफिक्स ड्राइभरहरु डाउनलोड गर्नुहोस्
हामी Nvidia Geforce अनुभव को बारे मा के थाहा छ?
Nvidia Geforce अनुभव मूल रूप बाट हाम्रो पीसी को लागी एक अनुप्रयोग वा डेस्कटप सफ्टवेयर हो कि डिजाइन गरीएको छ र मात्र र विशेष गरी Nvidia ग्राफिक्स कार्ड (मुख्य रूप बाट) को प्रयोगकर्ताहरु लाई प्रस्ताव गर्न को लागी बनाईएको हो। वर्तमान भिडियो गेम खेल्दा राम्रो प्रदर्शन, सबैभन्दा माग को एक। यो मूलतः के गर्दछ राम्रो सेटिंग्स तपाइँको पीसी र नयाँ Nvidia Geforce ड्राइवरहरु को अनुरूप बनाइन्छ।
चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि यसको ग्राफिक्स कार्ड को लागी Nvidia Geforce ड्राइभरहरु लचिलो भन्दा बढी हो तर हो, यदि तपाइँ एक विन्डोज सर्भर प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ - जो पहिले नै दुर्लभ छ, तर यो दिईन्छ - तपाइँले गर्नु पर्छ तपाइँको पीसी मा Nvidia शील्ड ड्राइभर को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी उनीहरुलाई आफ्नै मा स्थापना गर्नुहोस्। अन्यथा तपाइँ बिल्कुल केहि को बारे मा चिन्ता लिनु हुँदैन।
Geforce अनुभव कोड त्रुटि 0x0003 किन देखा पर्दछ?
धेरै केहि बगहरु यस Nvidia Geforce अनुभव कोड संग रिपोर्ट गरीएको छ र यसैले हामी बग को कारण हो कि विश्वास गर्न को लागी पर्याप्त कारण छ। निम्न कारणहरु मध्ये कुनै पनि:
Nvidia Geforce सेवाहरु यस समयमा चलिरहेको छैन
केहि Nvidia चालक वा चालक भ्रष्ट छ वा काम गर्दैन
तपाइँ नेटवर्क एडाप्टर संग एक समस्या छ
विन्डोज अपडेट बिग्रेको छ वा गलत तरिकाले स्थापित छ
अब हामी तपाइँ यी सबै को लागी समाधान दिन को लागी कोशिश गर्न जाँदैछौं र सिद्धान्त मा निम्न अनुच्छेद को कुनै पनी कुनै समस्या बिना Geforce अनुभव त्रुटि 0x0003 संग तपाइँको समस्या को समाधान गर्नु पर्छ। चिन्ता नगर। हामी त्यहाँ त्रुटि को लागी बिभिन्न समाधान संग जान्छौं:
समाधान १: Nvidia Geforce लाई डेस्कटप संग अन्तरक्रिया गर्न को लागी अधिक अनुमति दिनुहोस्
यो गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी हामी रन विन्डो खोलेर शुरू गर्नुपर्नेछ, त्यो हो, Windows + R कुञ्जी थिच्नुहोस् र त्यो सञ्झ्याल services.msc मा टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि सेवाहरु खोल्न को लागी तपाइँको कीबोर्ड मा इन्टर कुञ्जी थिच्नुहोस्। एक पटक तपाइँ यी चरणहरु गर्नुभयो तपाइँ तल जानुहोस् र 'Nvidia टेलीमेट्री कन्टेनर' र यसको गुणहरु प्रविष्ट गर्न को लागी सही बटन संग क्लिक गर्नु पर्छ।
अब एक पटक तपाइँ सम्पत्ती मा हुनुहुन्छ तपाइँ लगइन ट्याब छनौट गर्नु पर्छ र त्यसपछि सेवा डेस्कटप संग अन्तरक्रिया गर्न को लागी अनुमति दिनुहोस्, यसलाई सक्षम छोड्नुहोस्। यदि तपाइँ यसलाई अक्षम देख्नुहुन्छ, यसलाई काममा राख्नुहोस्। तपाइँ निम्न सेवाहरु संग यो चरण दोहोर्याउनु पर्छ कि तपाइँ सूची मा देख्नुहुनेछ र यो पुन: सुरु र परीक्षण समाप्त गरेपछि geforce अनुभव त्रुटि 0x0003 देखा पर्न बन्द भयो।
Nvidia प्रदर्शन सेवा
Nvidia स्थानीय प्रणाली कंटेनर
Nvidia नेटवर्क सेवा कंटेनर
समाधान २: Nvidia Geforce पुनर्स्थापित गर्नुहोस्
म सीधै यस तथ्य को लागी तपाइँलाई अधिक भाडामा लिन सक्छु Nvidia Geforce लाई पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। तेसैले, एक पटक तपाइँ यसलाई पुन: स्थापना र स्क्र्याच बाट सबै Nvidia ड्राइभरहरु छन्, तपाइँ तपाइँको पीसी र परीक्षण पुन: सुरु गर्न को लागी यदि हामी यहाँ लेख्न र पढ्न को लागी प्रसिद्ध त्रुटि यो लेख हल गरीएको छ र अब हामीलाई एक्लै छोड्न को लागी परीक्षण गर्नु पर्छ।
यो गर्न को लागी तपाइँ अवश्य सबै Nvidia चालकहरु को स्थापना रद्द पहिलो। यो छिटो गर्न को लागी, तपाइँ मात्र यी चरणहरु को पालन गर्न को लागी छ:
Windows + R को साथ रन विन्डो मा फिर्ता जानुहोस् र appwiz.cpl टाइप गर्नुहोस् र तपाइँको कीबोर्ड मा Enter थिच्नुहोस्। अब कार्यक्रम र सुविधाहरु तपाइँको लागी खुल्नेछ। तपाइँ Nvidia कार्यक्रम खोज्न र गर्न को लागी हुनेछ स्थापना रद्द गर्न दायाँ क्लिक गर्नुहोस्। एक पटक तपाइँ यी चरणहरु को पालन, एक पटक तपाइँको पीसी पुन: सुरु गर्नुहोस् र विन्डोज १० को लागी सबै Nvidia ड्राइवरहरु डाउनलोड गर्नुहोस् सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो सधैं नवीनतम संस्करण हो।
समाधान ३: नेटवर्क एडाप्टर रिसेट गर्नुहोस्
यो सत्य हो कि यो त्रुटि र समाधान हो कि कम से कम रिपोर्ट गरीएको छ तर यो तपाइँको मामला हुन सक्छ र यो प्रयास गर्न को लागी चोट लाग्दैन। नेटवर्क एडाप्टर रिसेट गर्न सक्षम हुन तपाईंले निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
सुरु गर्नको लागी हामी विन्डोज + आर संग एक पटक फेरी रन विन्डो मा जानु पर्छ। अब cmd टाइप गर्नुहोस् र कन्ट्रोल + शिफ्ट + इन्टर थिच्नुहोस् प्रशासक कमाण्ड प्रम्प्ट खोल्नको लागी। तपाइँ त्यहाँ आदेश प्रविष्ट गर्नु पर्छ netsh winsock रिसेट र इन्टर कुञ्जी थिच्नुहोस्। एकचोटि तपाइँ यो गर्नुभयो तपाइँ पीसी पुन: सुरु गर्न को लागी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् यदि त्रुटि सच्याइएको छ वा छैन।
समाधान ४: सबैभन्दा नयाँ ग्राफिक्स ड्राइभरहरु डाउनलोड गर्नुहोस्
यदि तपाइँ यो टाढा आउनुभएको छ र केहि पनि काम गरेको छैन, यो पहिले नै एक बिट हताश छ तर यो काम गर्न सक्छ। हरेस नखानुहोस्। हाम्रो अन्तिम विकल्प र समाधान को लागी ग्राफिक्स ड्राइभर को नवीनतम संस्करण डाउनलोड र पुन: स्थापना गर्न को लागी हो Nvidia Geforce अनुभव Windows 10 को लागी। यसको आधिकारिक वेबसाइट मा टाउको र तपाइँको प्रणाली र पीसी संग मिल्ने ड्राइभरहरु को सम्पूर्ण सूची डाउनलोड गर्नुहोस्। जब तपाइँ तिनीहरूलाई स्थापित गर्नुभयो, पुन: सुरु गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि यो सही गरीएको छ।
हामी आशा गर्दछौं कि यो लेख तपाइँको लागी उपयोगी भएको छ र तपाइँ Geforce अनुभव त्रुटि 0x0003 लाई हल गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। तपाइँलाई मद्दत गर्न र तपाइँलाई सूचित गर्न को लागी अर्को लेख मा भेट्नुहोस्। केहि पनी तपाइँ हामीलाई तपाइँको समस्या वा टिप्पणी बक्स मा राय छोड्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » ट्यूटोरियलहरू » Geforce अनुभव त्रुटि 0x0003 कसरी ठीक गर्ने
.XML फाईलहरू कसरी खोल्ने